महिला प्रहरी र आस्था राउत बिचको बिबाद - को बढी दोशी ? - Mero Tribune
Home ON POINT महिला प्रहरी र आस्था राउत बिचको बिबाद – को बढी दोशी ?
प्रहरीले गायिका आस्था राउतविरुद्ध अभद्र व्यवहारको कसुरमा कारबाही हुने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तैनाथ प्रहरी जवान रमिता श्रेष्ठमाथि अभद्र व्यवहार गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा राउतमाथि कारबाही हुने भएको हो।
जवान श्रेष्ठले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा शुक्रबार राउतविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले राउत र प्रहरी जवान श्रेष्ठबीचको कुराकानीको भिडिओ र त्यसबेलाको सिसिटिभी फुटेजको प्रतिवेदन महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीमा पठाएको छ।
उनले विमानस्थलमा प्रहरी चेकिङपछि सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनले बोलेका शब्दको चर्को आलोचना भैरहेको छ । उनले ड्युटीमा रहेकी प्रहरीमाथि ‘डन्ठीनी’, ‘प्युसिनी’जस्ता शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् ।
सीसी टिभी फुटेज हेर्दा पनि विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा राउतले आफूलाई खानतलासी गरेको भन्दै प्रहरी जवानमाथी आफ्नो क्रोध एक हिसाबले पोखाएको जस्तो देखिन्छ । महिला प्रहरीले उनलाई कफी लैजान दबाब दिएकी छन् तर उनले त्यसलाई खासै चासो दिएकी छैनन् ।
उनले ड्युटीमा रहेकी प्रहरीले तँ भनेर भनेको र ‘ज्याकेट खोल’ फेरि ‘भनेको सुनिनस् ?’ भनेपछि आफू आक्रोशित भएको भनेकी छन् ।
सिसिटिभी फुटेज हेर्दा ती प्रहरीले आफ्नो ड्युटी पालना गर्दै उनको खानातालासी गरेको देखिछ । बास्तबमा त्यहाँ अरुहरुको पनि त्यस्तै गरी तलासी लिइरहेको देखिन्छ । उनी मात्र त्यसरी आफ्नो आबेगको ज्वारभाटालाई प्रस्फुटन गर्नुपर्ने तड्कारो आवस्यकताजास्तो देखिदैन । र यो प्रहरीको बोलीको कुरा , यदी ती प्रहरीले साँचिकै तँ नै भनेको रहिछन् भने त्यो पनि सही भएन । ‘सेलिब्रीटि’ वा कलाकार भनेर कसैलाई पनि छुट दिन मिल्दैन । कानुन सबैलाई समान हो । पछी जसरि आस्थाले भिडियो लाईभमा आएर आफ्नो रिसको आबेगमा अपशब्द बोलिन् त्यो किमार्थ पाच्य हुन सक्दैन ।
Previous articleबंगलादेश डेन्टिस्ट्रीको लागि कस्तो छ त ?
Next articleअमेरिकी दूतावास भन्छ – एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन